Qasriga Neuschwanstein - Meel cibaado iyo sheeko xariiro | Safarka Absolut
Koonfurta Bavaria, Jarmalka, waxaan ka helnaa Qasriga Neuschwanstein. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee aagga. Mid ka mid ah qalcadaha ugu booqashada badan, taasina waxay dhiirrigelisay sayidkii sheekooyinka sheekooyinka, Walt Disney. Isaga waxaa laga sheegay inay tahay mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan mana ahan kaliya qalcadda lafteeda.
Sababtoo ah haddii Qalcadda Neuschwanstein ay mar hore leedahay qurux qurux badan, hareeraheeda ma aha wax aad uga dambeeya. Haddii aysan si adag u jirin ereyo lagu tilmaamo sixirka meesha. Dooxooyinka, magaalooyinka iyo harooyinka ayaa ah kuwa ku xeeran sawir caadi ah waana inaad booqataa. Miyaynu iska dhignaa a safarka bavaria?.
1 Sida loo tago Qalcadda Neuschwanstein
2 Taariikhda Qalcadda Neuschwanstein
3 Booqashada qalcadda
4 Saacadaha iyo qiimaha lagu booqanayo Neuschwanstein
5 Caannimada qalcadda Neuschwanstein
Sida loo tago Qalcadda Neuschwanstein
Laga soo bilaabo Munich waa 120 kiiloomitir. Waxaad ku tagi kartaa Füssen tareen toos kuu qaadi doona waxayna qaadan doontaa laba saacadood. In kasta oo haddii aad raacdo gaarigaaga, markaa waxaad noqon doontaa saacad iyo badh.
Haddii aad horey u joogtay Füssen markaa waxaad ku dhowdahay meesha aad u socoto. Laga soo bilaabo halkan, waxaad haysaa oo keliya 4 kilomitir. Waa inaad tagtaa magaalada la yiraahdo, Hohenschwangau.
Waxaad sidoo kale raaci kartaa baska RVA / OVG 73 ee aadaya Steingaden-Garmisch, iyo sidoo kale bas kale oo RVA / OVG 78 oo aadaya Schwangau. Tani waxay kaa soo dejin doontaa joogsiga Hohenschwangau.
Markaad tagto magaalada, waxaad ku raaxeysan kartaa laba daar oo waaweyn. Midka maanta noo ah jilaayaasheena iyo waliba, kan magaceeda u bixiyay magaaladan oo aan gadaal ka hadli doono. Meeshan waxaad ku arki doontaa baarkinka gawaarida iyo sanduuqyada si ay awood ugu helaan tikidhada kugu qaadaya qalciga sixirka.
Taariikhda Qalcadda Neuschwanstein
Waxay u muuqataa taas qalcadani waxay ku dhalatay mala awaalka Louis II. Haa, maxaa yeelay waxay u habeysay meel ka buuxan jaceyl, oo leh aragtiyo cajaa'ib leh, waqti markii shaqeynta aan mar dambe loo baahneyn oo bilicsanaanta la siiyay mudnaanta. Sidaa awgeed, waxaa jiray dhowr qoraal oo la muujiyay ka hor inta aan la helin natiijada ugu dambeysa. Luis wuxuu ku koray qalcadda deriska ah, ee uu iska lahaa aabihiis, laakiin qayb ka mid ah yaraantiisii ​​wuxuu ku qaatay mala-awaal halyeeyo iyo halyeeyo quraafaad ah.
Sidaa awgeed, waxaas oo dhan waa inay ka muuqdaan hoygiisa. Fikradaha kama maqnayn, laakiin waxaas oo dhan waxay keeneen in dhismuhu aad u qaaliyoobo. Qasrigu wuxuu bilaabay in la dhiso 1869. Deymaha boqorka waxay ahaayeen kuwo markii dhimashadiisa kadib, albaabada qalcadda loo furay dadweynaha. Mahadsanid dhammaan martida ay awoodaan inay bixiyaan. Telefoonka "Mad King", wax yar ayuu ku raaxeysan karaa qalcaddiisa riyadiisa. Ma uusan arkin inuu gebi ahaanba dhammaaday oo wuxuu ku raaxeysan karaa oo keliya dhowr bilood. Waxaa la sheegay inay qaabisho in ka badan hal milyan iyo bar booqdayaal sanad kasta.
Shaki la'aan, mid ka mid ah waxyaabaha ugu soo jiidashada badan waa sharraxaaddeeda. Wajiyadaha iyo wax kasta oo ku xeeran waxay mudan yihiin sheeko. Sababtaas awgeed waa mid ka mid ah kuwa ugu booqashada badan. Waxay ku taalaa qulqulka, halkaas oo dooxada iyo harooyinka cagaaran ay yihiin saaxiibbadaada ugu fiican. Kaliya laba kiiloo mitir ayaa jirta qalcaddii kale, halkaas oo uu Luis ku qaatay yaraantiisii. Waxay ku saabsan tahay qalcaddii hohenschwangau, sida magaalada loogu yeero. Runtu waxay tahay inay iyaduna mudan tahay in la booqdo. Waxaad ka iibsan kartaa a tigidh isku jira. Waxaa magaalada ku yaal xafiis uu ku iibiyo oo adiga ayaa kuu fiicnaan doonta. Waxa ugu fiican ee tan ayaa ah inaad doorato safarro hagitaan ah, kaliya markaa waad kuqooqi kartaa macluumaadka ugu fiican.
Dhismuhu wuxuu leeyahay dhowr meelood oo shaqsi ah. Qalcaddu waxay leedahay saldhig jacayl oo cad oo ma aha gurigaaga caadiga ah ee qalcadaha boqortooyada. Albaabka laga soo galo wuxuu leeyahay munaarado dhinac ah, darbiyada lebenka cas waxay ka duwan yihiin faallada dhagaxa nuuradda. Qaybta koowaad, waxaa loo qorsheeyay in la dhigo xeryaha.
Markaan galno, waxaan arki doonnaa a jaakadaha hubka ee boqortooyada Bavaria. Isaga gadaashiisa, waxaad arki doontaa goob dhoolatus ah oo leh laba heer. Dhinac waxaa ku yaal munaarad laba jibbaaran iyo tan kale, oo furan, muuqaalka weyn ee ku hareeraysan meesha. Waxa kale oo jira jaranjarooyin na geeya aag sare. In kasta oo munaaradda laba jibbaaran ee dhererkeedu yahay 45 mitir, haddana ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu caansan. Waqooyiga woqooyiga waanu la kulmi doonaa wicitaanka 'Guriga Knights'. Waxay leedahay seddex dabaq waxayna ahayd meeshii ragga kaliya ku kulmaan.
Laakiin sidoo kale waxaa jiray 'Qolka Haweenka', oo aan aad uga fogayn sidoo kalena leh saddex dabaq. In kasta oo runtu tahay in aan waligeed sidan oo kale loo isticmaalin. Haddii aan tagno aagga gudaha ee qalcaddii, waxaan dhihi karnaa waxay lahayd qiyaastii 200 oo qol. In kasta oo la dhammaystiray oo si dhammaystiran loo qalabeeyay waxaa jiray oo keliya 15. Dabaqyada hoose waxaa loogu talagalay guryaha addoommada. Maanta waxaa jira maamulkii qalcaddii.
Halka dabaqyada sare ay ahaayeen qeybaha gobolka iyo sidoo kale boqorka. Mid ka mid ah qolalka ugu waaweyn meeshan waa waxa loogu yeero 'Hoolka gabayaaga'. Waxay ku yaalliin heerka afraad oo ka sarreeya qolka boqorka. Waxaa dhiirrigeliya qolka ballanta ee qalcadda Wartburg. Waxay ahayd cashuur laakiin maaha in la bixiyo qoob-ka-ciyaarka, maxaa yeelay boqorku wuxuu lahaa dabeecad xoogaa murugo leh.
Saacadaha iyo qiimaha lagu booqanayo Neuschwanstein
Booqashooyinka waxay yeelan doonaan waqti go'an. Tani waxay ku imaan doontaa tigidhkaaga, in kasta oo la hagayo had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad hore u sii socoto. Waxay qaadanayaan ilaa 30 daqiiqo gudahana ma awoodi doontid inaad sawirro ka qaadatid. Waa la xiri doonaa maalmaha Kirismaska ​​booqashooyinkuna waxay noqon karaan subax iyo galabba.
Dadka waaweyn waxay bixin doonaan 12 euro iyo kuwa kayar 18 waxay heli doonaan bilaash gelitaan, halka ardayda ama ka weyn 65 ay tahay inay bixiyaan 11 euro. Haddii aad bixinaysid kharashka baarkinka, waxay noqon doontaa 5 euro laakiin baabuurkaaga waad dhigan kartaa maalinta oo dhan. Kahor intaanan xusin tigidhada isku dhafan ee labada qalcadood oo isu jira dhowr kiilomitir iyo tan saddexaad oo ah Linderhof. Hagaag, gelitaanka saddexda waxay noqon doonaan 24 euro. Haddii safarkaagu yahay ciidaha iyo xilli sare, waxaa fiican inaadan sugin inaad tigidhka halkaas ka hesho. Taas waxaad ku sameyn kartaa internetka. Waxaad hubisaa inaad sameyso safarkaaga riyada, in kastoo laga yaabo inay kugu dalacaan lacag dheeraad ah.
Caannimada qalcadda Neuschwanstein
Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna mid ka mid ah qalcadaha ugu booqashada badan Yurub. Wuxuu ka soo muuqday aflaam kala duwan laakiin waliba taxanaha telefishanka. Walt Disney way cadahay in meeshan oo kale ay ahayd inay dhiirigelin weyn u noqoto mid ka mid ah shaqadiisa. Waxay ahayd, wax intaa ka sii badan oo aan ka yarayn, ma jirin qalcaddii Disneyland 'Quruxda Hurdada'.
Xitaa muusiguba sidoo kale waxay ku ammaaneen isaga waana tan kooxda 'blur' ku dhex daray daboolka mid ka mid ah albumyadiisa ugu caansan, halka farshaxanku Andy Warhol Wuxuu sidoo kale u adeegsan lahaa shaqadiisa. Haddii aad raadineysay geeska sheekada safarkaaga xiga, markaa kan ma iloobi doontid. Xusuusnow inaad xasuus badan ku dhex qaadatid kamaraddaada ama mobilkaaga, maxaa yeelay hubaal, waxaad dib u soo celin doontaa xusuus badan oo qaab muuqaal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Qasriga Neuschwanstein
Halka laga arko Nalalka Woqooyi
Isha wabiga Cuervo